Naanị: Drew Struzan's Jaw-Dropping MondoCon 2017 na-ekpughe - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Naanị: Drew Struzan's Jaw-Dropping MondoCon 2017 na-ekpughe
Naanị: Drew Struzan's Jaw-Dropping MondoCon 2017 na-ekpughe
by Trey Hilburn III October 30, 2017 1,199 echiche
MondoCon dị anyị nso. Onye na-ebipụta akwụkwọ na-eme emume na-agbada Nov. 4 na 5 na Austin, Texas na Austin American-Statesman na anyị enweghị ike ichere. N'ime izu ole na ole gara aga, anyị ejirila ụfọdụ ihe dị mma nke usoro ihe ịtụnanya nke ndị na-ese ihe na-eweta. Ngosipụta nke ọ bụla dịka ịtụnanya dịka nke ikpeazụ. Ndi obere akpa anyị nọ na-ama jijiji n’ụjọ maka ọnụọgụ nke ihe ndị anyị kwesiri ịtinye na nchịkọta anyị.
Afọ a, akụkọ mgbe ochie Drew Struzan ga-abịa n'etiti ndepụta mara mma nke ndị na-ese ihe na anyị enweghị ike ịnwe onwe anyị, ụmụ okorobịa. Struzan na-ahụ maka ụdị ihe atụ ọ bụla a na-eme emume kemgbe ọtụtụ afọ, site na Star Wars na Indiana Jones na Blade Runner (ịkpọ aha ole na ole) nwoke a bụ akụkọ na-eje ije. Ọbịbịa ya na MondoCon afọ a na-eme ka ọ dị mma.
Anyị enweghị ike ịnwekwu obi ụtọ na a ga-enye anyị ohere ịkekọrịta naanị abụọ nke Mbipụta Struzan ga-eweta. N'ezie, ha abụọ na-atụgharị uche na ị ga - achọ ịnweta ụzọ ahụ, anyị na - eme ya. N'ụzọ doro anya, ogologo anụ Frankenstein na nwunye ya adịghị ka mma.
MondoCon bụ emume nke ihe niile Mondo hụrụ n'anya, gụnyere ihe nkiri, nka, ihe ọchị, egwu, ihe egwuregwu na nri. Ọ bụ ngwụsị izu nke ndị Fans bu n'uche, na-egosipụta ndị omenkà na ndị okike dị egwu ụwa, ogwe, screenings, nri gwongworo, ndụ akara na mmekọrịta ihe.
“MondoCon bu emume nke ihe nile Mondo huru n’anya, gunyere ihe nkiri, nka, ihe ochi, egwu, ihe egwuru egwu, na nri, anyi n’enwe obi uto igosiputa ihunanya anyi nwere n’obodo Austin site na ime nzuko a na etiti obodo Austin American-Statesman . ” Ihe Osisi na Ihe Omume nke Mondo kwuru, David Rancatore. “Ebe mgbakọ ahụ bụ ebe ụlọ obibi akwụkwọ akụkọ ji arụ ọrụ ma bụrụ nnukwu ohere maka ndị ọrụ ịtụnanya niile, ndị ngosi ngosi, ndị bịara, na ogwe na ngwụsị izu a. Obi dị anyị ụtọ ịnabata elekere mgbede anyị na Alamo Drafthouse na South Lamar, ụlọ nke Mondo ruo ọtụtụ afọ, na ndị na-egwu anyị ịnụ ụtọ ahụmịhe ọhụụ nke ihe nkiri nkiri.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ihe niile Mondo na MondoCon, gafee mondotees.com. Lee ya ebe ahụ, ndị be anyị!
Frankenstein nke Drew dere Struzan
Mbipụta nke 150
Ebiputara site na DL Screenprinting
Nwunye nke Frankenstein nke Drew Struzan